बाइबलमा पाइने सत्यको सरल र स्पष्ट व्याख्या | अध्ययन
“तपाईंले यी कुरा बुद्धिमान्‌ र बुद्धिजीवीहरूबाट होसियारीसाथ लुकाउनुभएको छ तर बालकहरूलाई प्रकट गर्नुभएको छ।”—लूका १०:२१.
सरल र स्पष्ट तरिकामा सिकाउन यहोवालाई उचित लाग्छ भनेर कस्ता उदाहरणहरूले देखाउँछन्‌?
बाइबल विवरणहरूलाई व्याख्या गर्ने तरिकामा कस्तो परिवर्तन भइरहेको छ?
येशूका दृष्टान्तहरूबारे हाम्रो बुझाइमा कस्ता छाँटकाँटहरू गरिएका छन्‌?
१. येशू किन “असाध्यै खुसी हुनुभयो”? (शीर्षकमाथिको चित्र हेर्नुहोस्)
भर्खरै मात्र येशूले ७० जना चेलालाई परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्न पठाउनुभएको थियो। तिनीहरूले यो जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्लान्‌ भनेर थाह पाउन उहाँ उत्सुक हुनुहुन्थ्यो। त्यतिबेलाका धूर्त र उच्चशिक्षा हासिल गरेका शास्त्री र फरिसीहरूलगायत अरू थुप्रैले सुसमाचारको विरोध गर्थे। तिनीहरूले गर्दा मानिसहरूले येशूलाई साधारण सिकर्मी भनेर हेप्थे अनि उहाँका चेलाहरूलाई “अशिक्षित अनि साधारण मानिस” भनेर हेला गर्थे। (प्रेषि. ४:१३; मर्कू. ६:३) सुसमाचार प्रचार गर्न जाँदा मानिसहरूले मात्र होइन, दुष्ट स्वर्गदूतहरूले समेत चेलाहरूको काम रोक्न खोजे। तैपनि तिनीहरूले प्रचार गर्न छोडेनन्‌। सुसमाचार प्रचार गरेपछि तिनीहरू रमाउँदै फर्के। यो देख्दा येशू ‘असाध्यै खुसी हुनुभयो र पवित्र शक्तिले भरिनुभयो।’ त्यतिबेला उहाँको रूप कस्तो देखिएको थियो होला, के तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? खुसी हुँदै उहाँ मुस्कुराउनुभएको र उहाँको आँखामा चमक आएको कल्पना गर्नुहुन्छ होला। विरोध आए तापनि चेलाहरू रमाउनुको र साहसी हुन सक्नुको कारण के हो, अब विचार गरौं।—लूका १०:१, १७-२१ पढ्नुहोस्।
२. (क) येशूका चेलाहरू कुन अर्थमा बालकहरूजस्तै थिए? (ख) धर्मशास्त्रका गहिरा-गहिरा कुराहरू बुझ्न चेलाहरूलाई केले मदत गऱ्यो?
२ येशूले यहोवालाई यसो भन्नुभयो, “हे बुबा, स्वर्ग र पृथ्वीका मालिक, सबैको अगाडि म तपाईंको प्रशंसा गर्छु, किनकि तपाईंले यी कुरा बुद्धिमान्‌ र बुद्धिजीवीहरूबाट लुकाउनुभएको छ तर बालकहरूलाई प्रकट गर्नुभएको छ। हो बुबा, यसै गर्न तपाईंलाई उचित लाग्यो।” (मत्ती ११:२५, २६) येशूले आफ्ना चेलाहरू वास्तवमै बालकहरू हुन्‌ भन्न खोज्नुभएको थिएन। बरु बुद्धिजीवी र शिक्षित मानिसहरूको नजरमा आफ्ना चेलाहरू बालकहरूजस्तै देखिन्छन्‌ भन्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यस्ता मानिसहरूले आफैलाई बुद्धिमान्‌ ठान्थे। महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई बालकहरूजस्तै नम्र हुन अनि सिक्न इच्छुक हुन आग्रह गर्दै हुनुहुन्थ्यो। (मत्ती १८:१-४) नम्र हुँदा चेलाहरूलाई कस्तो फाइदा भयो? पवित्र शक्तिको मदत पाएर तिनीहरूले धर्मशास्त्रका गहिरा-गहिरा कुराहरू बुझ्न सके। तर तिनीहरूलाई होच्याउने बुद्धिमान्‌ र बुद्धिजीवी भनौंदाहरूले भने बुझ्न सकेनन्‌। सैतानले गर्दा अनि उनीहरूको आफ्नै घमन्डले गर्दा उनीहरू अन्धा भएका थिए।
३. यस लेखमा हामी के छलफल गर्नेछौं?
३ सबै किसिमका नम्र मानिसहरूले धर्मशास्त्रका गहिरा-गहिरा कुराहरू बुझ्न पाएको देख्दा येशूको मन छोयो। हुन त तिनीहरू बुद्धिजीवी र शिक्षित थिएनन्‌। तैपनि यहोवाले तिनीहरूलाई गहिरा-गहिरा कुराहरू बुझ्ने मौका दिनुभयो। सरल अनि स्पष्ट तरिकामा सिकाउन यहोवालाई उचित लाग्यो। यहोवा परिवर्तन हुनुभएको छैन। उहाँ अहिले पनि सरल अनि स्पष्ट तरिकामा सिकाउन चाहनुहुन्छ। यो कुरा हामी कसरी थाह पाउन सक्छौं? यस प्रश्नको जवाफ पाउँदा हामी पनि येशूजस्तै असाध्यै खुसी हुन सक्छौं।
बाइबलका गहिरा-गहिरा कुराहरू सबैले बुझ्न पाएका छन्‌
४. प्रहरीधरहरा-को सरल संस्करण कसरी उपहार साबित भएको छ?
४ बितेका केही वर्षदेखि यहोवाको सङ्गठनले सरल र स्पष्ट तरिकामा सिकाउने कुरालाई जोड दिंदै आएको छ। यसको तीनवटा उदाहरण विचार गरौं। पहिलो उदाहरण हो, प्रहरीधरहरा-को सरल संस्करण। * भाषाको समस्या भएकाहरूको लागि र त्यत्ति लेखपढ गर्न नजान्नेहरूका लागि सरल संस्करण यहोवाले दिनुभएको एउटा उपहार हो। छोराछोरीले प्रहरीधरहरा-को यो संस्करण पढ्न रुचाएको कुरा परिवारका शिरहरूले याद गरेका छन्‌। यसरी केटाकेटीहरूले पनि आध्यात्मिक आहाराको मुख्य स्रोत अर्थात्‌ प्रहरीधरहरा-बाट लाभ उठाएका छन्‌। यो संस्करण पाएकोमा थुप्रैले हृदयदेखि कदर व्यक्त गर्दै परिचालक निकायलाई पत्र पठाएका छन्‌। एउटी बहिनीलाई प्रहरीधरहरा-को छलफलमा टिप्पणी गर्न साह्रै गाह्रो लाग्थ्यो। तिनी भन्छिन्‌, “सभामा टिप्पणी गर्न मलाई असाध्यै लाज लाग्थ्यो। म टुलटुलती हेरेरै मात्र बसथें।” तर सरल संस्करण प्रकाशित हुन थालेपछि तिनलाई सजिलो भयो। तिनी यसो भन्छिन्‌, “अहिले म धेरै टिप्पणी गर्छु र मलाई पहिलाजस्तो डर पनि लाग्दैन। यहोवा र तपाईंहरूलाई धन्यवाद!”
५. संशोधन गरिएको पवित्र बाइबल—नयाँ संसार अनुवाद-का केही फाइदाहरू के-के हुन्‌?
५ दोस्रो उदाहरण हो, संशोधन गरिएको पवित्र बाइबल—नयाँ संसार अनुवाद। अङ्ग्रेजी भाषाको यो बाइबल अक्टोबर ५, २०१३ मा आयोजना गरिएको यहोवाका साक्षीहरूको वार्षिक सभामा विमोचन गरिएको थियो। * यस बाइबलका थुप्रै पदहरूमा थोरै शब्दहरू मात्र प्रयोग गरिएका छन्‌। तर अर्थमा भने कुनै फरक परेको छैन, बरु अझ स्पष्ट भएको छ। उदाहरणका लागि, अय्यूब १०:१ लाई लिनुहोस्। यस पदमा पहिला २७ वटा शब्द थियो तर अहिले १९ वटा मात्र छ। साथै, हितोपदेश ८:६ मा पहिला २० वटा शब्द थियो तर अहिले १३ वटा मात्र छ। संशोधन गरिएको बाइबलमा दुवै पद अझ स्पष्ट भएका छन्‌। लामो समयदेखि वफादार रहेका एक जना अभिषिक्त भाइ यसो भन्छन्‌, “मैले भर्खरै नयाँ बाइबलबाट अय्यूबको किताब पढिसिध्याएँ। बल्ल राम्ररी बुझें।” अरू थुप्रैले पनि यस्तै टिप्पणी गरेका छन्‌।
६. मत्ती २४:४५-४७ बारे हाम्रो बुझाइमा गरिएको छाँटकाँट तपाईंलाई कस्तो लाग्यो?
६ तेस्रो उदाहरण हो, बाइबलको बुझाइमा हालै गरिएका केही छाँटकाँटहरू। एउटा छाँटकाँटबारे विचार गरौं। जुलाई १५, २०१३ को प्रहरीधरहरा-मा “विश्वासी र बुद्धिमान्‌ दास”-बारे हाम्रो बुझाइमा छाँटकाँट गरिएको थियो। (मत्ती २४:४५-४७) यस लेखमा विश्वासी दास भनेको परिचालक निकाय हो भनेर बुझाइएको थियो। “घरका अरू दासहरू” चाहिं आध्यात्मिक भोजन खानेजति सबै हुन्‌। यसमा अभिषिक्त ख्रीष्टियनहरू र “अरू भेडा” दुवै पर्छन्‌। (यूह. १०:१६) बाइबलबाट यस्ता सत्य कुराहरू सिक्न पाउँदा र अरू मानिसहरूलाई पनि सिकाउन पाउँदा हामीलाई असाध्यै खुसी लाग्छ। यहोवा सरल र स्पष्टसित सिकाउन चाहनुहुन्छ भनेर अरू कस्ता उदाहरणहरूले देखाउँछ?
बाइबल विवरणहरूको सरल र स्पष्ट व्याख्या
७, ८. भविष्यमा हुने कुरालाई सङ्केत गर्ने केही बाइबल विवरणहरू बताउनुहोस्।
७ तपाईंले वर्षौंदेखि यहोवाको सेवा गरिरहनुभएको छ भने हाम्रा प्रकाशनहरूमा बाइबल विवरणहरू व्याख्या गर्ने तरिका पहिलेभन्दा फरक भएको याद गर्नुभएको होला। पहिले-पहिलेका हाम्रा प्रकाशनहरूमा बाइबलका केही विवरणहरूले भविष्यमा हुने कुनै महत्त्वपूर्ण कुरालाई सङ्केत गर्छ भनेर बताइएको हुन्थ्यो। बाइबलका केही विवरणहरूलाई लाक्षणिक अर्थ लगाउन सकिने धर्मशास्त्रीय आधार छ। उदाहरणको लागि, येशूले “भविष्यवक्ता योनाको चिन्ह”-बारे बताउनुभयो। (मत्ती १२:३९, ४० पढ्नुहोस्) योना तीन दिन र तीन रात माछाको पेटमा थिए। यहोवाले योनालाई नबचाउनुभएको भए माछाको पेट नै तिनको चिहान बन्ने थियो। योना माछाको पेटमा रहेको समयले आफू चिहानमा रहने समयलाई सङ्केत गर्छ भनी येशूले बताउनुभयो।
८ भविष्यमा हुने कुरालाई सङ्केत गर्ने अरू विवरणहरू पनि बाइबलमा छन्‌। प्रेषित पावलले तीमध्ये केही विवरणहरू उल्लेख गरेका छन्‌। उदाहरणका लागि, हागार र सारासित अब्राहामको सम्बन्धले इस्राएल राष्ट्रसित र उहाँको सङ्गठनको स्वर्गमा रहेको भागसित यहोवाले गाँस्नुभएको सम्बन्धलाई सङ्केत गर्छ। (गला. ४:२२-२६) त्यसैगरि बासस्थान र मन्दिर, प्रायश्‍चितको दिन, प्रधान पुजारी र मोशाको व्यवस्थाका अन्य पक्षहरू “आउन लागेका असल कुराहरूको छाया” थिए। (हिब्रू ९:२३-२५; १०:१) यस्ता विवरणहरू रोचक हुन्छन्‌ र यसले हाम्रो विश्वास पनि बलियो बनाउँछ। तर बाइबलका हरेक विवरण, पात्र र वस्तुले कसै न कसैलाई वा कुनै न कुनै चीजलाई सङ्केत गर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु ठीक हो?
९. पहिले-पहिलेका प्रकाशनहरूमा नाबोतको विवरणलाई कसरी व्याख्या गरिएको थियो?
९ बाइबलका हरेक विवरण, पात्र र वस्तुले कसै न कसैलाई वा कुनै न कुनै चीजलाई सङ्केत गर्छ भनेर पहिले-पहिलेका हाम्रा प्रकाशनहरूमा बताइएको थियो। नाबोतको विवरण विचार गरौं। दुष्ट रानी ईजेबेलले तिनको दाखबारी आफ्नो श्रीमान्‌ आहाबलाई दिलाउन नाबोतलाई मार्ने षड्यन्त्र रचिन्‌। (१ राजा २१:१-१६) सन्‌ १९३२ मा यस विवरणले भविष्यमा हुने एउटा घटनालाई सङ्केत गर्छ भनेर बताइएको थियो। आहाब र ईजेबेलले सैतान र त्यसको सङ्गठनलाई सङ्केत गर्छ अनि नाबोतले येशूलाई सङ्केत गर्छ भनिएको थियो। नाबोतको हत्या गरिएको घटनाले येशूलाई मारिएको घटनालाई सङ्केत गर्छ पनि भनिएको थियो। तर सन्‌ १९६१ मा प्रकाशित “तपाईंको नाम पवित्र पारियोस्” (अङ्ग्रेजी) भन्ने किताबमा नाबोतले अभिषिक्त ख्रीष्टियनहरूलाई अनि ईजेबेलले चर्चजगत्‌लाई सङ्केत गर्छ भनियो। ईजेबेलले नाबोतलाई सताएको घटनाले चाहिं अभिषिक्त ख्रीष्टियनहरूले अन्तको दिनमा भोगेको सतावटलाई बुझाउँछ भनियो। बाइबलको यो बुझाइले वर्षौंसम्म परमेश्वरका सेवकहरूको विश्वासलाई बलियो बनायो। तर बाइबल विवरणहरूलाई अहिले त्यसरी व्याख्या गरिंदैन। किन?
१०. (क) बाइबल विवरणहरू व्याख्या गर्दा विश्वासी दास कसरी होसियार भएको छ? (ख) हालैका हाम्रा प्रकाशनहरूमा कुन कुरालाई जोड दिइएको छ?
१० यहोवाले वर्षौंदेखि “विश्वासी र बुद्धिमान्‌ दास”-लाई अझ चनाखो हुन मदत गर्नुभएको छ। त्यसैले स्पष्ट धर्मशास्त्रीय आधार छ भने मात्र तिनीहरू बाइबलको कुनै विवरणले भविष्यमा हुने घटनालाई सङ्केत गर्छ भनेर बताउँछन्‌। पहिले-पहिलेका प्रकाशनहरूमा बाइबलको कुनै विवरणलाई व्याख्या गर्दा त्यस विवरणमा उल्लेख गरिएको व्यक्तिले कसलाई अनि किन सङ्केत गर्छ भन्नेजस्ता स-साना कुराहरू पनि खुलाइएको हुन्थ्यो। त्यसैले पाठकहरूलाई पढेको कुरा बुझ्न, सम्झन र लागू गर्न गाह्रो हुन्थ्यो। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त, बाइबलका विवरणमा उल्लेख गरिएका कुराहरूले केलाई सङ्केत गर्छ भनेर बुझ्ने प्रयास गर्दा त्यस विवरणले सिकाउन खोजेको नैतिक र व्यावहारिक पाठ ओझेलमा पर्न सक्थ्यो। त्यसैले हालैका हाम्रा प्रकाशनहरूमा विश्वास, सहनशीलता, परमेश्वरको भक्ति र अन्य महत्त्वपूर्ण गुणहरूबारे बाइबल विवरणहरूले सिकाउने सरल र व्यावहारिक पाठहरूलाई जोड दिइएको छ। *
नाबोतको उदाहरणबाट हामी महत्त्वपूर्ण पाठ सिक्न सक्छौं (अनुच्छेद ११ हेर्नुहोस्)
११. (क) नाबोतको विवरणलाई आज हामीले कसरी बुझेका छौं? तिनको उदाहरणबाट हामी कुन कुरा बुझ्न सक्छौं? (ख) हालैका हाम्रा प्रकाशनहरूमा बाइबल विवरणहरूको भविष्यसूचक अर्थलाई किन जोड दिइएको छैन? (यस अङ्कको “पाठकहरूको प्रश्न” हेर्नुहोस्)
११ अहिले हामीले नाबोतको विवरण अझ स्पष्ट र सरल ढङ्गमा बुझेका छौं। नाबोतले आफ्नो जीवन गुमाउनुको कारण तिनले येशू वा अभिषिक्त जनहरूलाई सङ्केत गर्ने भएकोले होइन, बरु तिनी यहोवाको नजरमा निष्ठावान्‌ भएकोले हो। अख्तियारमा भएका मानिसहरूले असाध्यै दबाब दिंदा पनि उनले यहोवाको नियम तोडेनन्‌। (गन्ती ३६:७; १ राजा २१:३) यहोवाको नजरमा निष्ठावान्‌ हुँदा जोसुकैले पनि दुःख भोग्नुपर्ने हुन सक्छ भनेर नाबोतको उदाहरणले बुझाउँछ। (२ तिमोथी ३:१२ पढ्नुहोस्) विश्वासलाई अझ बलियो पार्ने यस्तो पाठ सबै ख्रीष्टियनले सजिलै बुझ्न, सम्झन र लागू गर्न सक्छन्‌।
१२. (क) बाइबल विवरणहरूबारे हामी कुन निष्कर्षमा पुग्नुहुँदैन? (ख) हामीले किन गहिरा कुराहरूको समेत स्पष्ट व्याख्या गर्न सकेका छौं? (फुटनोट हेर्नुहोस्)
१२ बाइबल विवरणहरूले व्यावहारिक पाठ मात्र सिकाउँछ, ती विवरणहरूको अरू कुनै अर्थ छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु उचित हो? होइन। हालैका हाम्रा प्रकाशनहरूले बाइबलको एउटा विवरण अर्को विवरणसित कसरी सम्बन्धित छ भन्ने कुरामा जोड दिएको छ, ती विवरणहरूको लाक्षणिक अर्थमा मात्र होइन। उदाहरणको लागि, सतावट र मृत्यु भोग्नुपर्दासमेत नाबोत निष्ठावान्‌ रहेको कुराले येशू र अभिषिक्त जनहरू निष्ठावान्‌ रहेको कुरालाई सम्झाउँछ। साथै, यसले येशूका “अरू भेडा” निष्ठावान्‌ रहेको कुरालाई पनि सम्झाउँछ। यहोवाले हामीलाई सरल तरिकामा सिकाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। *
येशूका दृष्टान्तहरूको सरल व्याख्या
१३. हामीले येशूका दृष्टान्तहरूलाई अझ सरल र स्पष्टसित बुझेका छौं भनेर के-कस्ता उदाहरणहरूले देखाउँछ?
१३ येशू सबैभन्दा महान्‌ शिक्षक हुनुहुन्छ। मानिसहरूलाई शिक्षा दिंदा उहाँ दृष्टान्त पनि चलाउनुहुन्थ्यो। (मत्ती १३:३४) दृष्टान्तले मनमा सजिलै चित्र कोर्छ र त्यसबाट सिकेको कुरा मनसम्म पुग्छ। वर्षौंदेखि हाम्रा प्रकाशनहरूले येशूका दृष्टान्तहरूलाई पनि सरल र स्पष्टसित व्याख्या गरेको छ। जुलाई १, २००८ को प्रहरीधरहरा-बाट खमिर, रायोको दाना र ठूलो जालबारे येशूले बताउनुभएको दृष्टान्त हामीले अझ स्पष्टसित बुझेका थियौं। यसरी बुझ्न पाउँदा हामीलाई असाध्यै खुसी लागेको थिएन र? यी दृष्टान्तहरू परमेश्वरको राज्यसित सम्बन्धित छन्‌, जुन राज्यले थुप्रै मानिसलाई दुष्ट संसारबाट अलग भएर ख्रीष्टको चेला बन्न मदत गरेको छ।
१४. (क) पहिले-पहिले असल छिमेकीको दृष्टान्तलाई कसरी व्याख्या गरिएको थियो? (ख) यो दृष्टान्तलाई अहिले हामीले कसरी बुझेका छौं?
१४ येशूले विस्तृत तवरमा बताउनुभएका दृष्टान्तहरूबारे चाहिं के भन्न सकिन्छ? तीमध्ये केही दृष्टान्तहरूको लाक्षणिक अर्थ छ अनि केही दृष्टान्तहरूबाट भने हामी व्यावहारिक पाठ सिक्न सक्छौं। तर कुन दृष्टान्तको लाक्षणिक अर्थ छ र कुनको छैन भनेर कसरी थाह पाउन सक्छौं? वर्षहरू बित्दै जाँदा यस प्रश्नको जवाफ स्पष्ट हुँदै गइरहेको छ। जस्तै, असल छिमेकीबारे येशूले बताउनुभएको दृष्टान्तलाई १९२४ को प्रहरीधरहरा-मा (अङ्ग्रेजी) कसरी व्याख्या गरिएको थियो, विचार गरौं। (लूका १०:३०-३७) सामरीले येशूलाई चित्रण गर्छ, यरूशलेमदेखि यरीहो जाने ओरालो बाटोले अदनको बगैंचामा विद्रोह भएदेखि मानव समाज पतनको बाटोमा लागेको कुरालाई सङ्केत गर्छ, डाँकुहरूले ठूलठूला उद्योग र नाफाखोरहरूलाई चित्रण गर्छ अनि पुजारी र लेवीले चाहिं चर्चजगत्‌लाई बुझाउँछ भनेर उक्त प्रहरीधरहरा-मा बताइएको थियो। अहिलेका हाम्रा प्रकाशनहरूमा खाँचोमा परेकाहरूलाई, विशेषगरि आध्यात्मिक खाँचोमा परेकाहरूलाई पक्षपात नगरी बाइबलको कुरा सिकाउनुपर्छ भनेर बुझाउन यो दृष्टान्त प्रयोग गरिन्छ। यहोवाले हामीलाई आफ्नो शिक्षा स्पष्ट ढङ्गमा सिकाउनुभएकोमा हामीलाई खुसी लाग्दैन र?
१५. अर्को लेखमा हामी के छलफल गर्नेछौं?
१५ अर्को लेखमा हामी दस कन्याको दृष्टान्त जाँच्नेछौं। (मत्ती २५:१-१३) अन्तको दिनका आफ्ना चेलाहरूले यो रोचक दृष्टान्तलाई कसरी बुझेको येशू चाहनुहुन्थ्यो? के यस दृष्टान्तको हरेक पात्र, वस्तु र घटनाले भविष्यमा हुने कुरालाई सङ्केत गर्छ? वा आफ्ना चेलाहरूले यो दृष्टान्तबाट व्यावहारिक पाठ सिकेको येशू चाहनुहुन्थ्यो कि? यसबारे अर्को हप्ता छलफल गरौंला।
^ अनु.4सन्‌ २०११, जुलाईको अङ्कदेखि अङ्ग्रेजी भाषाको सरल संस्करण प्रकाशित हुन थाल्यो। त्यसदेखि यता सरल संस्करण अरू भाषाहरूमा पनि तयार पारिएको छ।
^ अनु.5बाइबलको संशोधित संस्करण अरू भाषामा पनि उपलब्ध गराउन तयारी भइरहेको छ।
^ अनु. 10 उदाहरणको लागि, तिनीहरूको विश्वास अनुकरण गर्नुहोस् किताबमा बाइबलका १४ जना पात्रको जीवनमा घटेका घटनाहरूको विस्तृत विवरण पाइन्छ। यस किताबमा पात्रहरूले कसलाई सङ्केत गर्छ भन्ने कुरामा होइन, बरु तिनीहरूबाट सिक्न सकिने व्यावहारिक पाठमा जोड दिइएको छ।
^ अनु. 12 पावलका पत्रहरूको कुनै-कुनै भागलगायत बाइबलका “केही कुराहरू बुझ्न गाह्रा छन्‌।” तर बाइबलका सबै लेखकहरूले पवित्र शक्तिको प्रेरणा पाएर लेखेका हुन्‌। त्यही शक्तिले आज साँचो ख्रीष्टियनहरूलाई बाइबलमा पाइने सत्य बुझ्न मदत गरेको छ। हाम्रो बुझ्ने क्षमता सीमित भए तापनि पवित्र शक्तिको मदतले गर्दा “परमेश्वरका गहिरा कुराहरूसमेत” बुझ्न सकेका छौं।—२ पत्रु. ३:१६, १७; १ कोरि. २:१०.